Wp/blk/ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏ
"ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ" ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဆီႏကို အနွိုးဓာတ်ပါအာ၊ (တနယ်ꩻ) တကေႏပဲစ်ꩻတဝ်း အရသာႏဓာတ်ထီဖုံႏ ပါသော့ꩻအာဆီႏကိုသွူ။ လိုꩻအံႏအာငါႏ ထာꩻရသာႏနွိုးတွော့ꩻ ကမာꩻပဲစ်ꩻမာꩻကေႏအီဒါႏ အာဟာႏရ ပါစကဓာတ်မေႏ အာႏကပေႏဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ကုဲင်းထွာသွူ။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း လိုꩻအံႏအာငါႏ အရသာႏနွိုး၊ အရသာႏဗွမ်ႏမျိုꩻဖုံႏ၊ လိုꩻရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻဆေ့ꩻ၊ လိုꩻအုံစွူ အုံသာႏငါႏထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းထွာနေနေသွူ။
အမျိုꩻ ၁: Family history
အမျိုꩻ ၂: Obesity, lack of exercise, genetics
လိုꩻမီႏထွာ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ဆီႏမာဆီႏခွိုꩻထာꩻ၊ ဟို့ꩻခိုးခွိုꩻထီ၊ အုံထာꩻလဲ့ ထွူႏထွူႏထာႏထာႏ၊ သွီႏယာႏလဲ့ တရေꩻတဝ်း၊ သွီႏယာႏပွစ်ꩻ ဗိုးဗိုးဗားဗားဒါႏ၊ ယဟန်ႏလဲ့ ပြွောင်ႏလွဥ်ꩻတော၊ ယဟန်ႏလဲ့ ယွောင်လွဥ်ꩻထာꩻ၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ အထွာပွုံႏတဗွိုန်တဝ်း၊ မဲ့လဲ့ တမို့ဒါႏ၊ ရောႏဂါႏမီႏတန်နဝ်ꩻ မဲ့ကုဲင်ထိုꩻဒါႏ၊ နမ်းတဗာႏယို အဆာကဲင် မီႏပေါႏလွဥ်ထွာလွဥ်နဝ်ꩻ လုမ်ꩻလာꩻယပ်ꩻငါႏ၊ တောႏတောႏဟဝ်ချာတဝ်းသွူ။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏယို အမီႏတန် အမီႏတဝ်လွဥ်သွူနဝ်ꩻ ဆီႏထာꩻထွိုင်းကုဲင်းဟွံဒါႏသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏအဝ်ႏတွိုင်ꩻလဲ့ ထွိုင်းတဟွံတဝ်းတဲင် ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏ အဝ်ႏတအဝ်ႏတဝ်း ဖေႏကသေႏချာႏနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏသွုံꩻ ခေတ်တသာစံꩻနယ်ꩻအလꩻ ဆီႏထီကို သော့ꩻတသီႏတွော့ꩻ ဒွိုႏထွားမꩻ သေစဲင်းသွူ။ ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻတန်လွုမ်ꩻမꩻမွေးတဝ်း၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏတသီႏယွုံႏကအဝ်ႏဒါႏ ဝေင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏစဲစ်ဆေ့ꩻစံꩻထွားဖေႏဒျာႏသွူ။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏယို လိုꩻသက်ရွယ်ႏပေႏနဝ်ꩻ ထွာကြွို့ꩻတဝ်း၊ ကဲဥ်းအာအာထွာဒျာႏ လိုꩻသက်လစ်ꩻငတ်ꩻဆီမာꩻကီဖုံႏသွူ။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏယို တအံႏဗာႏကြွို့ꩻတဝ်း ထာꩻနွိုးထာꩻဗွမ်ႏတွော့ꩻ ရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻကအာဒါႏ ထာꩻလုပ်ꩻထာꩻမာꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာကြွို့ꩻတဝ်းသွူ။ လိုꩻအံႏအွီႏအံႏဟဝ်ထာꩻ၊ လိုꩻအုံစွူအုံသာႏထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းထွာအာသွူ။ အနောက်တိုင်း တသီႏအင်္ဂလေက်နယ်ꩻအလꩻနဝ်ꩻ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏယို အစွိုးထဲ့နွောင်ꩻအီ တသီႏမျိုꩻနဝ်ꩻ တအဲဥ်ထဝ်းဒွိုန်း၊ အဝ်ႏအသက်သာႏနေးနယ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏယို မန်းနဝ်ꩻဟဲ့ꩻ"နာတာရှည်"ရောႏဂါႏတမျိုꩻ၊ ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ "ရောႏဂါႏသက်ဆွာꩻ"ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသားနဝ်ꩻ အံႏသေႏသေႏ၊ အံႏမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏဗာႏတသီႏသွူ။ တိုင်းရင်းဆေးတသီႏနယ်ꩻဒွေါင်ႏသား ကရိုꩻဒါႏ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏ အစွိုးထဲ့အီ တသီႏမျိုꩻနဝ်ꩻ ဆရာႏဝွန်ႏသီး တယွုမ်းတဝ်းသွူ။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏအစွိုးထဲ့အီ တသီႏမျိုꩻယို ကမော့ꩻကသေဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဖေႏတသီႏပညာႏ"နိုဘယ်ဆု"တဲင် အုံအံႏစွဥ်ႏတသက်လွုမ်းလဲ့ တလို့တဝ်းသွူ။ တသီႏကရိုꩻယိုလဲ့ အနောက်တိုင်းတသီႏတရိုꩻတဝ်း၊ တိုင်းရင်းတသီႏနယ်ꩻတရိုꩻတဝ်း တဖြာꩻနဝ်ꩻ သက်သာႏအီလဲ့ တဖြာꩻနဝ်ꩻ တသက်သာႏအီတဝ်းသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တသီႏတနယ်ꩻ မီႏဟဝ်သက်သာႏအီတဝ်းလဲ့ သွုံꩻအံႏစံꩻဗာႏယင်းတနယ်ꩻသွူ။ စံꩻထွားဗာႏအနယ်ꩻနယ်ꩻသွူ။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသား မီႏမဲဥ်စံꩻလိုမ်ꩻလာꩻအီတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဒွေါင်ႏနဝ်ꩻ စုရွမ်တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏ နုဲင်းဆꩻငါယိုအတွိုင်ꩻသွူ။
၁။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသားနဝ်ꩻ မေ့ခါႏဖွန်ႏယို နွတ်တွမ်ႏတဝတ်ꩻ(တမူ)ထီတွော့ꩻ လုံꩻတတွာသွော့ ဖက်မစ်ပွမ်းရာႏနော၊ အံႏဖေႏသွော့ တလဲင်ႏသွံလုံꩻ၊ တနီꩻ သွံလဲင်ႏနော။
၂။ ဆီႏနွိုးသားနဝ်ꩻ ဖက်ကွမ်းဖေ့ꩻ (ဖက်ꩻကွမ်းခါႏဒျာႏ၊ ဖက်ကွမ်းနွုမ်ꩻဟေ့ꩻမွေးတဝ်း)ယို ခြွူလစ်ꩻထီတထီတွော့ꩻ အွꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻသွော့နော။
၃။ ဆီႏနွိုးသားနဝ်ꩻ ထီကိုကအဝ်ႏဒါႏ ဗေဒါတုဲင်ယို ရွတ်ꩻပသာႏတွမ်ႏထီလျားတွော့ꩻ ကြူးအံႏသွော့နော၊ စေ့ꩻသော့ꩻပါသွော့ မောက်ꩻဖါးရာႏနော၊ ကြူးအံႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ ကြူးအံႏအာအာ၊ ကြူးအံႏသွော့ ပဥ်လာလာနော။
၄။ ဆီႏနွိုးသားနဝ်ꩻ ထထီႏတခဲင်ႏ(ဆားငါႏပုဲင်ႏ) ရာႏမိုယို အိုႏထိုꩻအပီတွော့ꩻ ဖို့ꩻသွော့မေႏအွူလောင်း၊ ပေါႏမဥ်လဲ့ တောက်ꩻဗွပ်ꩻထွူတွော့ꩻ ဆျာꩻတွမ်ႏနံးမန်ꩻ အံႏသွော့စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနော၊ ရောႏဂါႏမီႏပေႏနဝ်ꩻ ထထီႏလို့တသီႏရပ်လဲ့ ဟဝ်ဒျာႏ၊ ရောႏဂါႏမီႏတန်နဝ်ꩻ အံႏဗာႏနေး နီလာရပ်နဝ်ꩻသွူ။ ပေါႏတဟဝ်တဝ်းလဲ့ အံႏဖေႏထဲင်းထဲင်းသွော့နော။
၅။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ သင်္ဘောꩻရာႏမိုဗန်ဗန် တဖြုံႏယို ကျာႏတကွို့ꩻထိုꩻ ၄-ပြုံႏတပြုံႏရပ်နဝ်ꩻတွော့ꩻ ထေထန်ႏလို့လို့အခူꩻနော၊ ထေထန်ႏထွူအခူꩻနဝ်ꩻ သင်္ဘောꩻရာႏကိုယို ခွိုင်းကတွမ်ႏ သေက်ꩻသော့ꩻသွော့နေင်းသဲင်နော၊ သော့ꩻထွူနေင်းသဲင်နဝ်ꩻ ထူႏယင်းကကျာႏတကွိုꩻထိုꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဒို့ꩻအီချာထွူတွမ်ႏ ခွဥ်းဝါႏပေႏပေႏစိထိန်ꩻခါꩻသွော့နေား၊ ထွူနဝ်ꩻ ချင်းသော့ꩻထီတဲင် ခြွူသွံထီတထီတွော့ꩻ အံꩻသွော့ခြွူထီနဝ်ꩻနေား၊ ပေါႏလꩻသွူနွတ်ꩻနီနဝ်ꩻ တဲက်ထွားသွော့ဆီႏနော၊ ပေါႏတဟဝ်တဝ်းဒွိုန်းလဲ့ ခြွူအွꩻထဲင်းထဲင်းသွော့နော။
၆။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသားနဝ်ꩻ လမ်းသောင်လမ်းထျꩻ ကကုဲင်းဆို့ꩻဒါႏ ကဝ်ႏမောက်ꩻကြင်ꩻ (မူးစေ့မတ်စေ့ပန်း)ယို ခြွူပသာႏသာႏသွူတွော့ꩻ အွꩻသွော့ တလဲင်ႏထာႏဝဝန်ႏနေင်းထီ၊ အွꩻသွော့ တနီꩻသွံလဲင်ႏနော၊ ကဝ်ႏမောက်ကြင်ꩻနဝ်ꩻ ခါႏငါႏတဲင် ပေါႏခြွူညတဲ့ အွꩻယပ်ꩻငါႏသွူ။
၇။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသားနဝ်ꩻ အွဲဝါႏယို ခြွူအထီ အွꩻခွိုꩻခွိုꩻသွော့နော၊ အွဲဝါႏနဝ်ꩻ အမွူးဟမ်းဗွိုန်ဗွိုန် အွဲဖြေင်းနဝ်ꩻလဲ့ အရသာႏတနွိုးတဝ်းသွူ။ ပါꩻမူႏဟို့ပုံꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ ထွာဆီႏနွိုးရောႏဂါႏလဲ့ ဖြေꩻအံႏနွောင်ꩻတဝ်း တသီႏအင်္ဂလေက်တွော့ꩻ ခြွူအွꩻအွဲဝါႏနဝ်ꩻ ဟဝ်တငါစွဥ်ႏတွိုႏယိုခါသွူ။ အွဲဝါႏနဝ်ꩻ ခွန်ကုဝေထျꩻ ဟိုပုံꩻနောင်တောင်ꩻယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆို့ꩻခါꩻသွူ။ မီႏအဝ်ႏလိုႏဒါႏနဝ်ꩻ လွဥ်ရီနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။
၈။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ကမ်ႏပုဲင်းဒီႏ (ဘဲဥ)(ဆျာဒီႏမွေးတဝ်း)တဖြုံႏယို ဖောက်သော့ꩻသွူဝန်ႏတွော့ꩻ တွမ်ႏကမ်းပုဲင်းဒီႏထီ အဆေ့ꩻအအာ တတထွာဝင်ꩻ တဝတ်ꩻထီ (တမူ)ထီယို ဆျာꩻသော့ꩻရော်ꩻထွူတဲင် အွꩻသွော့တလဲင်ႏချင်ꩻနော၊ အွꩻတလဲင်ႏ ဟဝ်တဝ်းလြ့ အွꩻသွော့ခွိုင်းမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏနော။
၉။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသားနဝ်ꩻ ကန်ꩻတမတ်၊ ယမ်ꩻစိန်ꩻတမတ်၊ တသာႏခါႏဟဝ်စားတမတ် (တသာႏခါႏနုတ်ဟို့ꩻမွေးတဝ်း) ယိုသွံမျိုꩻနဝ်ꩻ သော့ꩻငီꩻဝင်ꩻရေသန့်ဗူးကိုတဲင် အွꩻဖေႏသွော့ တလဲင်ႏတဝန်ႏနေင်းထီ၊ တနီꩻသွံလဲင်ႏနော၊ တသီႏယိုသွံမျိုꩻနဝ်ꩻ ဖြေꩻဗာႏဒျာႏ ဘယတသီႏဆဲင်ႏ ဝေင်ꩻတန်ကိုသွူ။
၁၀။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ တလာꩻရာႏတသဥ်ယို ထောင်းပဲစ်ꩻပဲစ်ထွူတွော့ꩻ စေ့ꩻအထီ သော့ꩻခါꩻသွော့ပလဲင်ꩻ၊ မေ့ဒီႏတသဥ်ယိုလဲ့ ပသေကြောင်းကြောင်း ထောင်းပဲစ်ꩻပဲစ်ꩻထွူတွော့ꩻ စေ့ꩻအထီသော့ꩻခါꩻသွော့ ပလဲင်ꩻခေါ်ခေါ်နော။
တလာꩻရာႏထီ သွံစောဟန်ႏအို၊ တဝတ်ꩻထီတစောဟန်ႏအို သော့ꩻရော်ꩻ ကွယ်ရော်ꩻဝင်ꩻ ဝန်ႏကိုတွော့ꩻ အံႏသွော့တနီꩻနော၊ မေ့ထီ သွံစောဟန်ႏအို၊ တဝတ်ꩻထီ တစောဟန်ႏအိုယို သော့ꩻရော်ꩻကွယ်ရောꩻဝင်ꩻ ဝန်ႏကိုတွော့ꩻ အံႏသွော့တနီꩻနော။ နုဲင်းယိုအဝွိုင်ꩻ တလာꩻရာႏထီ တနီꩻ၊ မေ့ထီတနီꩻ အံႏခလဲ့ꩻလွဝင်ꩻနဝ်ꩻ မွူးနီꩻတဆီရပ်ငါလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
၁၁။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ တဒွီခါႏ (တတဲမ်ႏခါႏ)ရာႏယို အံႏအဲင်ႏတသဥ်နေး တနီꩻနီလဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏ တတွာကာဖီရာႏရပ်နဝ်ꩻ အံႏနီသွံနီꩻငါလဲ့ ဟဝ်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ တဒွီခါႏနဝ်ꩻ အရာႏပုံႏနုဲင်းတဒွီနဝ်ꩻတွော့ꩻ အရာႏပေႏလွုမ်ꩻ၊ တတွာမောက်ꩻဖါးရာႏရပ်နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ တဒွီခါႏနဝ်ꩻ ခါႏငါႏတဲင် မဥ်ႏအံႏအာလွဥ်ꩻနဝ်ꩻ သီးမူꩻဒါႏ၊ အော့ꩻဒါႏထာꩻသွူ။ တဆီနီလာ လိုႏမုဲင်ꩻခါ ဖေႏကလꩻနဝ်ꩻ ခမ်းခါအရာႏလွိုင်ႏယို ကျာႏပဥ်ဗေင်ႏဗေင်ႏ အွဥ်ႏလိုသဲင်ထွူတွော့ꩻ အွဥ်ႏသေꩻခါꩻလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။
၁၂။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ခီဖြို့ꩻယို ဖို့ꩻကျွမ်ꩻသွူမေႏတွော့ꩻ မာꩻဖွန်ႏသော့ꩻခါꩻသွော့ ပလဲင်ꩻ၊ ထွူနဝ်ꩻ လုံးတူႏကအဝ်ႏစဲသေႏသေႏထီ ဟမ်းတလောင်ꩻလောင်ꩻယို ဖို့ꩻလျားလျားမေႏတွော့ꩻ ကိပ်သော့ꩻသွော့ထီဗုံꩻကို၊ လုံးဖို့ꩻထီ တဝန်ႏနေင်းထီယို တွမ်ႏခီဖြို့ꩻဖွန်ႏယာႏခဥ်ႏ တပယ်ꩻရပ် အံႏငီꩻသွော့ဝင်ꩻ တနီꩻသွံလဲင်ႏနော၊ အံႏသွော့ ခွိုင်းမုဲင်ꩻနီꩻနီꩻနော၊ ခီဖြို့ꩻမဥ်ႏအဲဥ်ထဝ်းနဝ်ꩻ အွꩻအာအာငါ လုံးဖို့ꩻထီငါလဲ့ ဟဝ်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။
၁၃။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ဒွိုႏအံႏခွိုꩻခွိုꩻဖေႏသွော့ ထထီႏဗောင်နော၊ ထထီႏဗောင်နဝ်ꩻ အရသာႏတချꩻတဲင် ထထီႏထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။
၁၄။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ မောက်ꩻဖါးရာႏ သွံဖြုံႏ၊ တသာႏငိုး တမတ်၊ ဆင်မနွယ်ႏတကျပ်၊ ပဆျာႏစော့ꩻ သံကျပ်၊ ယိုလစ်ꩻမျိုꩻအကို မောက်ꩻဖါးရာႏနဝ်ꩻ ဖꩻတဖြုံႏနီသွံခဝ်၊ ဆင်မနွယ်ႏနဝ်ꩻ သွယ်ꩻပဥ်ဗေင်ႏဗေင်ႏထွူတွော့ꩻ သော့ꩻဝန်ႏဟမ်းတန်တန်ကို ဆျာꩻသော့ꩻထီလျားလျားတွော့ꩻ ဒို့ꩻခါꩻသွော့နော၊ ပေါႏမဥ်ႏခွꩻလဲ့ ချင်ႏအွꩻသွော့နော၊ ထီလဲ့ ချင်းသော့ꩻဒျာႏနော။
၁၅။ လိုꩻကမော့ꩻဒါႏ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ အောင်ႏလျာပေႏရွီး၊ သက္ကရင်ႏပေႏရွီး၊ ဆင်မနွယ်ႏရွီး၊ တထဲ့ꩻပဲမ်ႏတညင်း၊ ပြောင်ႏသီရွီး၊ ယိုငတ်ꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အယာႏခဥ်ႏတတွာတွာ ထူႏထွူတွော့ꩻ ချင်းသော့ꩻထီ ခြွူအွꩻသွော့နော၊ ထူႏအာအာ ခြွူအာအာ အွꩻအာအာသွော့နော။
ဆင်မနွယ်ႏနဝ်ꩻ အရွီးမꩻမွေးတဝ်း ခြွူအွꩻငါအထောင်ꩻငါလဲ့ ဟဝ်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ၊ တထဲ့ꩻပဲမ်ႏတညင်းပင်နဝ်ꩻ တမျိုꩻငါလဲ့ ဟဝ်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။
၁၆။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ နံႏရုပ်ꩻကောင် (နံႏရုပ်ꩻဆူႏသား) စူတသဲဥ်ꩻရပ်ယို တဒွေါ့ꩻကွို့ꩻ တဒွေါ့ꩻပဲသ်ꩻသာႏထွူတွော့ꩻ တွမ်ႏကမ်းပုဲင်းဒီႏ(ဘဲဥ)တဖြုံႏ၊ ထီသွံတန်ႏနေင်ႏထီ ခြွူငီꩻဝင်ꩻတွော့ꩻ ထီမဥ်ႏအဝ်ႏကုဲင် တဝန်ႏနေင်းထီနဝ်ꩻ လင်းလင်ꩻအွဥ်ႏခွꩻသွော့နော၊ မဥ်ႏခွꩻသွူနဝ်ꩻ အွꩻရီးအထီထွူမꩻ ကွဲအံႏကမ်ႏပုဲင်းဒီႏနဝ်ꩻနော၊ မဥ်ႏအွꩻဖေႏ မွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုႏတလဲင်ႏ တနီꩻနီလဲင်ႏနဝ်ꩻ အွꩻဖေႏနီသွံနီꩻငါလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
၁၇။ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏအဝ်ႏသားနဝ်ꩻ တမာႏဖေ့ꩻခြွူထီယို ထွိုင်ႏအွꩻစဝ်းစဝ်းဖေႏသွော့ မွူးနီꩻပေါင်ꩻအာအာနော၊ တမာႏမွူးနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းယို တလွိုင်ႏတဝ်းလဲ့ မန်းခမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏပြုံႏပြင်ႏထာꩻသွူ။ အဖေ့ꩻမဥ်ႏတယိုꩻတဝ်းလဲ့ ခြွူအွꩻဗော့ꩻအလာႏလဲ့ အလွိုးအဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။ တမာႏလာႏနဝ်ꩻ ဘယတသီႏဆဲင်ႏကို ဝင်ꩻအဝ်ႏစာတဲင် အငိုꩻတကားတဝ်းသွူ။
↑ Diabetes Blue Circle Symbol။ International Diabetes Federation (17 March 2006)။
↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named WHO2013
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Kit2009
↑ "Diabetic Gastroparesis: Principles and Current Trends in Management" (July 2018). Diabetes Therapy9(Suppl 1): 1–42. doi:10.1007/s13300-018-0454-9. PMID 29934758.
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Sa2016
↑ "Type 1 diabetes through the life span:aposition statement of the American Diabetes Association" (July 2014). Diabetes Care 37 (7): 2034–2054. doi:10.2337/dc14-1140. PMID 24935775.
↑ Causes of Diabetes (June 2014)။
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named AFP09
↑ Drug Treatment of Diabetes Mellitus (February 2017)။
↑ 10.0 10.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IDF2019
↑ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၅၃
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏ&oldid=5306863"
Last edited on 11 January 2022, at 08:13
This page was last edited on 11 January 2022, at 08:13.